Noho ny tsy fahombiazan’ny mpitondra : krismasy ao anaty fahantrana sy tsy fitoniana | NewsMada
Noho ny tsy fahombiazan’ny mpitondra : krismasy ao anaty fahantrana sy tsy fitoniana
Krismasy indray… Tsy toy ny isan-taona, fa mihasarotra sy mihamafy ny fiainam-bahoaka. Ny afitsoky ny mpitondra no antony: tsy fahombiazana, fampihorohoroana, fampahantrana…
Mbola ao anaty krizy mafy ny Krismasy… Toy ny hatramin’izay ihany. Manampy trotraka ny delestazy amin’ny faritra sasany, ny tsy fandriampahalemana, ny fidangan’ny vidim-piainana…
Ao anaty fahasahiranana lalina sy maharitra ny vahoaka: tsy afa-mifety araka izay tokony ho izy; eny, na amin’izay farafahakeliny azo leferina aza. Na ireo fikambanana sy antokom-pivavahana mpanampy ny sahirana aza, misy tra-pahasahiranana: tsy afa-manome fanampiana amin’izao Krismasy izao.
Misondrotra izaitsizy ny vidin-javatra, indrindra ireo entana ilaina andavanandro: vary, menaka, siramany… Fidangan’ny vidim-piainana no atrehin’ny ankamaroan’ny olona, fa tsy fety. Fihenan’ny fahefa-mividy no entin’izao fety izao, fa tsy inona…
Fahoriam-bahoaka ny tsy fandriampahalemana
Na eo aza izay hoe hetsika fampandrian-tany etsy sy eroa, manjaka hatrany ny asan-jiolahy, ny fakana an-keriny… Misy tsy ilaozan’ny fitsaram-bahoaka. Tsy mampandry fahalemana ny vahoaka koa, na anatin’ny fetiny aza: ny ady tany etsy sy eroa, indrindra ny afitsok’ireo Sinoa.
Hatramin’izao, tsy manazava ny mpitondra… minia bemarenina. Famonoana vahoaka ny fanomezana tany ny vahiny. Nefa izay miaro tanindrazana: darohana, ampihorohoroana, gadraina… Politika maloto ny raharaha. Fitaovana amin’izany ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana.
Na toa misavasava ratsy kely aza ny delestazy: ao anaty haizina ny vahoaka noho ny tsy fisian’ny fangaraharana: vitavita ho azy, ohatra, izay nenti-nanana ny Frankofonia. Ahoana ny amin’ny trosa amina miliara dolara? Tsy misy fanazavana.
Hitondra inona eo amin’ny fifandraisan’ny vahoaka sy ny mpitondra izao Krismasy izao? Fifamelana, fihavanana, fifampitokisana… Mbola azo antenaina amin’izany ve ny mpitondra? Efa samy nampiaka-peo ny mpanao politika, firaisamonina sivily, fiangonana… Noho ny tsy fanarahan-dalàn’ny mpitondra, ny kolikoly, ny kiantranontrano, ny tsimatimanaota, ny jadona, ny fampihorohoroana…
Fety kristianina ny Krismasy: fahatsiarovana ny nahaterahan’i Kristy ao am-pon’izay mino ka mandray Azy, rehefa nibebaka. Na izany aza, efa zary fetin’izao tontolo izao koa: fifamelana, famitranam-pihavanana… Hitondra fisaintsaianana ho an’ny mpitondra?
“(…) fa tonga amin’izao tontolo izao ny mazava, nefa aleon’ny olona ny maizina toy izay ny mazava, satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ratsy dia mankahala ny mazava sady tsy manatona ny mazava, fandrao hita miharihary ny asany.” (Jaona 3: 19-20)